Taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliyeed Cali Xersi Barre Cali oo ku dhaawacay Hubka dhigis uu ku sameynaayey askari qori ku sitay gudaha magaalada Muqdisho | Somalisan.com Home
Taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliyeed Cali Xersi Barre Cali oo ku dhaawacay Hubka dhigis uu ku sameynaayey askari qori ku sitay gudaha magaalada Muqdisho 12/4/2012 4:01:00 P
Ciidamada dowlada ayey u suurta gali weyday in ay gacanta ku dhigaan ninka qoriga sitay maadaama uu muujiyey isdifaac nafhurnimo ah Askari ka tirsan kuwa Dowlada ayaa taliyaha xabad ku dhuftay markii ilaalada taliyaha ay isku dayeen inay qori uu watay ka qaadaan. Mid ka mid ah ilaalada taliyaha iyo askarigii la rabay in qoreyga laga qaado ayaa iskula dhagay qoreyga kadibna waxaa xabad ka baxsatay askartaasi ay haleeshay taliyaha kaasoo la dhigay isbitaalka Daarushifaa ee KM4. Lugta midig ayuu taliyuhu ka dhaawacmat taliyaha waxaana uu falku ka dhacay wadada 21-ka October ee degmada waaberi magaalada Muqdisho. Ciidamada dowlada ayey u suurta gali weyday in ay gacanta ku dhigaan ninka qoriga sitay maadaama uu muujiyey isdifaac nafhurnimo ah Taasi oo u sahashay kolkii danbe in uu baxsaday askarigii dhibka u gaystay taliyaha kaasoo aaney jirin cid qabatay madaama uu hubeysnaa. Taliye Cali gaab ayaa lagu yaqaan firfircooni iyo karti shaqadiisa ku saabsan waxana uu hore u soo noqday taliyaha saldhiga 4irdood.